ဝတ်ရည်ခြွေမည့် လူယုတ်မာလက်ထဲမှ ရိုးသားတဲ့မိန်းကလေးကို ကယ်တင်လိုက်တဲ့ လူလိမ်တစ်ယောက်... - APANNPYAY
/ ၀တ်ရည်ခြွေမည့် လူယုတ်မာလက်ထဲမှ ရိုးသားတဲ့မိန်းကလေးကို ကယ်တင်လိုက်တဲ့ လူလိမ်တစ်ယောက်...
၀တ်ရည်ခြွေမည့် လူယုတ်မာလက်ထဲမှ ရိုးသားတဲ့မိန်းကလေးကို ကယ်တင်လိုက်တဲ့ လူလိမ်တစ်ယောက်...
ရုံးရှေ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွင် ကျွန်တော် ထိုင်နေစဉ် ကိုလင်းဇော်က ကောင်မလေး တစ်ယောက်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည် ။ မောင်သက်ညီလေး သူ့ ကိုမှတ်ထား ချောရတနာ တဲ့ ။ အကို့ ကောင်မလေးပဲ ။ ချော သူကတော့ကိုယ့်ညီလေးလို ခင်တဲ့ မောင်သက် မှတ်ထား နော် ။ ဟုတ်ကဲ့ တွေ့ ရတာဝမ်းသာပါတယ် အကို ။ ကျွန်တော်ကပြုံးပြီး ခေါင်းညိတ်ပြ လိုက်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်က ကိုလင်းဇော်ကို မျက်လုံးပြူးကြည့် လိုက်တော့ သူက မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြပါတယ် ။ ညနေ ရုံးဆင်းချိန်ရောက်တော့ ။ ကိုလင်း ခင်းဗျားမှာ မိန်းမ ရှိရက်နဲ့အဲဒါဘာလုပ်တာလဲ။ အဲဒါ မင်းပြောမှ သူသိမှာလေကွာ ညီလေးကလဲ။။ သူ့ ကိုမပြောမိ စေနဲ့ နော် ။ ကျွန်တော် ဘာမှမပြောတော့။ ဒီလိုနဲ့၂ လလောက်အကြာ လ္ကက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတုံး ။ ကိုသက် ညီမကိုမှတ်မိလား ။ သြော် မှတ်မိပါတယ် ထိုင်လေ။ ဘာသောက်မလဲ ။ ရပါတယ်တခုခုပေါ့ ။ ကျွန်တော် ကအအေးတစ်ပုလင်းမှာပေး လိုက်ပါတယ် ။ အကို့ ကို ချောမေးစရာရှိလို့။ အင်းမေးလေ ဘာသိချင်လို့ လဲ ။ ဟိုလေ ကိုလင်း မှာချောအပြင် တစ်ခြားကောင်မလေးတွေ ရှိလားဟင် ။ ချောက ကိုလင်း ချစ်သူဆိုပေမဲ့။ ကိုလင်းအကြောင်းကို ဘာမှသိပ် သိတာမဟုတ်ဘူး အကို ။ မရှိပါဘူး ချောရဲ့ ဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ချောကကိုလင်းကို တကယ်ချစ်တာလား ။ ဟုတ်ကဲ့လက်ထပ်ဖို့ အထိရည်ရွယ် ထားပါတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲအကို ။ ဟာ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ကောင်းပါတယ် ။
ကျွန်တော်က ကိုလင်းစကားကြောင့် ချောကို လိမ်လိုက်ရပေမဲ့ လိပ်ပြာကတော့မသန့် ချင်။ ခဏအကြာကိုလင်းရောက်လာပြီး။ ဘာတွေပြောနေကြတာလဲ။ ဘာမှမပြောပါဘူးဗျာ။ လာချောသွားကြမယ်။ ကိုလင်း ချောကိုခေါ်ပြီးထွက်သွား ပါတော့တယ်။ နောက်တစ်ရက်မှာ ကျွန်တော်က ။ ကိုလင်း ကောင်မလေးကို အပျော်တွဲနေတာလား ။ ဘာလုပ်မှာလဲ ။ ငါအခု အိမ်ခန်းရှာနေတယ် ။ ပြီးရင် နီးရာတရားရုံး တစ်ခုခုမှာ လက်ထပ်မယ် ။ ဟာဗျာခင်ဗျား ကတော့ မဟုတ်တာ လုပ်တော့မယ် ။ ကျွန်တော် ကိုလင်းထွက်သွားတော့ စဉ်းစားနေလိုက်တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်မှာ ကိုလင်းက ။ မောင် သက်ညီလေး အကို့မိန်းမနေမကောင်းလို့ တဲ့ ဖုန်းလာတယ် ။နယ်ကို ခဏပြန်ရမယ် ။ ချောလာရင်ကြည့်ပြောထား လိုက်ကွာ ။ အကို ခွင့်တစ်ပတ် ယူသွားတယ် ။ ဟုတ်ကဲ့အကို စိတ်ချပါ ။ နောက် ၂ ရက်လောက်မှာ ချောရောက် လာပါတယ် ။ ထင်သားပဲ ကိုသက်ဒီမှာရှိမယ် ဆိုတာ ။ အင်း ကျွန်တော်က ဒီဆိုင်မှာပဲ ထိုင်တယ်လေ ။
ကျွန်တော်က ချောအတွက် အအေးတစ်ပုလင်းမှာပေး လိုက်ပြီး ။ ချောကို ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ် ကိုလင်းနဲ့ ပတ်သက်တယ် ။ အင်းပြောလေ အကို ။ ကိုလင်းခွင့်ယူ သွားတယ် ။ သူ့မိန်းမ ကလေးမွေးလို့။ ဟင် တကယ် သေချာလား ကိုသက် ။ ကျွန်တော် ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တော့ ချောမျက်ရည်ဝိုင်းလာပြီး မျက်ရည်ပေါက်တွေ ကျလာသည် ။ ကျွန်တော်မျက်နှာလွှဲ နေလိုက်ပါတယ် ။ခဏနေမှ။ ဒါဆိုရင် ချော မနက်ဖြန်ဒီကိုလာ ကျွန်တော်ခေါ်သွားမယ် ။ဒါပေမဲ့ ဟိုရောက်ရင် ဘာမှမပြောပါဘူးလို့ဂတိပေးရမယ် ။ ဘယ်လိုလဲ ။ ချောကမျက်ရည်သုတ် လိုက်ပြီး ။ ကောင်းပြီလေ ကိုသက် ချော သေချာအောင် လိုက်ကြည့်ချင်တယ် ။ တော်ဝင် အထူကုဆေးခန်း သားဖွားမီးယပ်နှင့် အထွေထွေရောဂါကု ဆေးခန်းဆိုင်း ဘုတ်ကိုမြင်တော့ ချောခြေလှမ်းတုံ့ သွားသည် ။ လာလေ ချော။ ကျွန်တော်က ခေါ်လိုက်သည် ။ မွေးကင်းစကလေး တစ်ယောက်နှင့် အတူတူ အိပ်နေသော အမျိုးသမီး တစ်ယောက်၏ ကုတင်ဘေးတွင် ရပ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော်က နှုတ်ဆက်လိုက်သည် ။ အစ်မနေကောင်း လား ။ ကလေးကဘာလေးလဲအ စ်မ ။ ကျွန်တော် စကားသံကြောင့်အစ်မက ထထိုင်ပြီး ။ သြော်မောင်သက်ပါလား ။ယောင်္ကျားလေးလေ ။ ဒါနဲ့ကိုလင်းကိုလဲ မမြင်ပါလား ။ အမလေး မင်းအကို ကို တော့ ပြောမနေပါနဲ့ ။
မနက်ကတည်းက ကလေးပစ္စည်းလေးတွေ သွားဝယ်မယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားလိုက်တာ မလာတော့ဘူး ။ညနေထမင်းပို့ ချိန်မှပဲလာတော့မယ် ထင်တယ် ။ သူကဘယ်သူလေးလဲ မောင်သက် . မင်းကောင်မလေးလား ။ အစ်မစကားကြောင့် ချော မျက်နှာရဲသွားသည် ။ ကျွန်တော် က ပျာပျာ သလဲ ။ ဟာမဟုတ်ပါဘူး အစ်မကလဲ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းပါ ။ အိုး ဆောရီးနော် ညီမလေး အမမသိလို့ ပါ ။ အစ်မကတောင်းပန် စကားပြောတော့ ။ချော က လည်း ။ ရပါတယ် အစ်မရယ် မသိလို့ ပြောတာပဲ ။ ခဏကြာတော့ အစ်မကိုနှုတ်ဆက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ပြန်ထွက် လာပါတော့တယ် ။ ချော ကတော့ကတ္တာလမ်းကို ငုံ့ ကြည့်ယင်း တလှမ်းချင်းလှမ်းလျှက် ။ ကိုသက် ကိုလင်းကို ပြောလိုက်ပါ ။ ချောကိုလဲ လာမတွေ့ ပါနဲ့ ချောအလုပ်ထဲ ကိုလဲ လုံးဝမလာပါနဲ့ ။ ဒီလို လူယုတ်မာမျိုးကိုလဲ ချောက အရမ်းမုန်းတယ်လို့ ပြောပေးပါ ။ ချောသွားတော့တယ် ။ ချောမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ မျက်ရည် နဲ့ အတူ ဒေါသကြောင့်မျက်နှာက တင်းနေသည် ။ ကျွန်တော် ခေါင်းညိတ်ပြ လိုက်ပါတယ် ။ ချောကပြောပြီး တာနဲ့ ထွက်သွား ပါတော့တယ် ။
ကျွန်တော် ကိုလင်း လက်ထဲကို စာတစ်စောင်ထည့်လိုက်ပါတယ် ။ ဘာလဲကွမောင်သက် ။ ဖတ်ကြည့်လေ ။ ကိုလင်းဇော် ကျွန်မ မိဘ သဘောတူတဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ် ကျွန်မကိုမေ့ လိုက်ပါတော့ ။ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ။ ချော ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲကွာ မင်းကိုရော ဘာပြောသွားသေးလဲ ။ ဘာမှပြောမသွားဘူး သူ့ နောက်မှာလဲ လူတစ်ယောက်ပါတယ် ။။ စာပေးပြီး ထွက်သွားတော့တာပဲ။ ဟား ဒီလောက်တောင်မြန် ရသလားကွာ ။အေးလေ ပြီးတော့လဲ ပြီးသွားတာပဲပေါ့ ။ ကိုလင်းဇော်က ပြောလဲပြော စာကိုဆုတ်ဖြဲပြီး ထွက်သွားပါတော့တယ် ။ ကိုလင်းထွက်သွားတော့ ကျွန်တော် ကျေနပ်စွာပြုံးလိုက်ပါတယ် ။
ဒီစာကို ချောရေးတာ မဟုတ်ပဲ ကျွန်တော်ရေးမှန်း ကိုလင်းသိလျှင် ။ ကျွန်တော့်ကို လူလိမ်ဟုပြောမှာ အသေအချာပင် ။ ချော သွားတွေ့ သော ကလေး အမေ သည်လည်း ကိုလင်း မိန်းမမဟုတ်ပဲ ကျွန်တော့် အစ်မ ၀မ်းကွဲမှန်း ချောသိခဲ့လျှင်။ ကျွန်တော့်ကို လူလိမ်ဟု ပြောမှာ အသေအချာပင် ။ ကျွန်တော်ကြိုတင် အကျိုး အကြောင်း ပြောပြပြီး အကူအညီတောင်းထား သောကြာင့် ။ အစ်မကလဲ မိန်းမ ချင်း ကိုယ်ချင်းစာ သဖြင့် ကူညီခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ ကိုလင်းကဲ့သို လူယုတ်မာတစ်ယောက်၏ လက်မှ ရိုးသားသော ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ ဘ၀ကို ကယ်တင်ခွင့် ရလိုက် ခြင်းကို ပင် ကျွန်တော် ကျေနပ်မိပါသည် ။ ထို့ ကြောင့် ကျွန်တော့်အား လူလိမ်ဟု ထင်လျှင် ထင်ကြပါစေတော့ ။
Ref - ကိုမောင်မောင်
ရုံးရှေ့ လ်ဘကျရညျဆိုငျတှငျ ကြှနျတျော ထိုငျနစေဉျ ကိုလငျးဇျောက ကောငျမလေး တဈျယောကျနှငျ့ မိတျဆကျပေးသညျ ။ မောငျသကျညီလေး သူ့ ကိုမှတျထား ခြောရတနာ တဲ့ ။ အကို့ ကောငျမလေးပဲ ။ ခြော သူကတော့ကိုယျ့ညီလေးလို ခငျတဲ့ မောငျသကျ မှတျထား နျော ။ ဟုတျကဲ့ တှေ့ ရတာဝမျးသာပါတယျ အကို ။ ကြှနျတျောကပွုံးပွီး ခေါငျးညိတျပွ လိုကျပါတယျ ။ ကြှနျတျောက ကိုလငျးဇျောကို မကျြလုံးပွူးကွညျ့ လိုကျတော့ သူက မကျြစိတဈဖကျမှိတျပွပါတယျ ။ ညနေ ရုံးဆငျးခြိနျရောကျတော့ ။ ကိုလငျး ခငျးဗြားမှာ မိနျးမ ရှိရကျနဲ့အဲဒါဘာလုပျတာလဲ။ အဲဒါ မငျးပွောမှ သူသိမှာလကှော ညီလေးကလဲ။။ သူ့ ကိုမပွောမိ စနေဲ့ နျော ။ ကြှနျတျော ဘာမှမပွောတော့။ ဒီလိုနဲ့၂ လလောကျအကွာ လ်ကကျရညျဆိုငျမှာ ထိုငျနတေုံး ။ ကိုသကျ ညီမကိုမှတျမိလား ။ သွျော မှတျမိပါတယျ ထိုငျလေ။ ဘာသောကျမလဲ ။ ရပါတယျတခုခုပေါ့ ။ ကြှနျတျော ကအအေးတဈပုလငျးမှာပေး လိုကျပါတယျ ။ အကို့ ကို ခြောမေးစရာရှိလို့။ အငျးမေးလေ ဘာသိခငျြလို့ လဲ ။ ဟိုလေ ကိုလငျး မှာခြောအပွငျ တဈခွားကောငျမလေးတှေ ရှိလားဟငျ ။ ခြောက ကိုလငျး ခဈြသူဆိုပမေဲ့။ ကိုလငျးအကွောငျးကို ဘာမှသိပျ သိတာမဟုတျဘူး အကို ။ မရှိပါဘူး ခြောရဲ့ ဘာမှမစိုးရိမျပါနဲ့။ ခြောကကိုလငျးကို တကယျခဈြတာလား ။ ဟုတျကဲ့လကျထပျဖို့ အထိရညျရှယျ ထားပါတယျ ။ ဘာဖွဈလို့ လဲအကို ။ ဟာ ဘာမှမဖွဈပါဘူး ကောငျးပါတယျ ။
ကြှနျတျောက ကိုလငျးစကားကွောငျ့ ခြောကို လိမျလိုကျရပမေဲ့ လိပျပွာကတော့မသနျ့ ခငျြ။ ခဏအကွာကိုလငျးရောကျလာပွီး။ ဘာတှပွေောနကွေတာလဲ။ ဘာမှမပွောပါဘူးဗြာ။ လာခြောသှားကွမယျ။ ကိုလငျး ခြောကိုချေါပွီးထှကျသှား ပါတော့တယျ။ နောကျတဈရကျမှာ ကြှနျတျောက ။ ကိုလငျး ကောငျမလေးကို အပြျောတှဲနတောလား ။ ဘာလုပျမှာလဲ ။ ငါအခု အိမျခနျးရှာနတေယျ ။ ပွီးရငျ နီးရာတရားရုံး တဈခုခုမှာ လကျထပျမယျ ။ ဟာဗြာခငျဗြား ကတော့ မဟုတျတာ လုပျတော့မယျ ။ ကြှနျတျော ကိုလငျးထှကျသှားတော့ စဉျးစားနလေိုကျတယျ ။ ဒီလိုနဲ့ တဈရကျမှာ ကိုလငျးက ။ မောငျ သကျညီလေး အကို့မိနျးမနမေကောငျးလို့ တဲ့ ဖုနျးလာတယျ ။နယျကို ခဏပွနျရမယျ ။ ခြောလာရငျကွညျ့ပွောထား လိုကျကှာ ။ အကို ခှငျ့တဈပတျ ယူသှားတယျ ။ ဟုတျကဲ့အကို စိတျခပြါ ။ နောကျ ၂ ရကျလောကျမှာ ခြောရောကျ လာပါတယျ ။ ထငျသားပဲ ကိုသကျဒီမှာရှိမယျ ဆိုတာ ။ အငျး ကြှနျတျောက ဒီဆိုငျမှာပဲ ထိုငျတယျလေ ။
ကြှနျတျောက ခြောအတှကျ အအေးတဈပုလငျးမှာပေး လိုကျပွီး ။ ခြောကို ကြှနျတျောပွောစရာရှိတယျ ကိုလငျးနဲ့ ပတျသကျတယျ ။ အငျးပွောလေ အကို ။ ကိုလငျးခှငျ့ယူ သှားတယျ ။ သူ့မိနျးမ ကလေးမှေးလို့။ ဟငျ တကယျ သခြောလား ကိုသကျ ။ ကြှနျတျော ခေါငျးညိတျပွလိုကျတော့ ခြောမကျြရညျဝိုငျးလာပွီး မကျြရညျပေါကျတှေ ကလြာသညျ ။ ကြှနျတျောမကျြနှာလှဲ နလေိုကျပါတယျ ။ခဏနမှေ။ ဒါဆိုရငျ ခြော မနကျဖွနျဒီကိုလာ ကြှနျတျောချေါသှားမယျ ။ဒါပမေဲ့ ဟိုရောကျရငျ ဘာမှမပွောပါဘူးလို့ဂတိပေးရမယျ ။ ဘယျလိုလဲ ။ ခြောကမကျြရညျသုတျ လိုကျပွီး ။ ကောငျးပွီလေ ကိုသကျ ခြော သခြောအောငျ လိုကျကွညျ့ခငျြတယျ ။ တျောဝငျ အထူကုဆေးခနျး သားဖှားမီးယပျနှငျ့ အထှထှေရေောဂါကု ဆေးခနျးဆိုငျး ဘုတျကိုမွငျတော့ ခြောခွလှေမျးတုံ့ သှားသညျ ။ လာလေ ခြော။ ကြှနျတျောက ချေါလိုကျသညျ ။ မှေးကငျးစကလေေး တဈယောကျနှငျ့ အတူတူ အိပျနသေော အမြိုးသမီး တဈယောကျ၏ ကုတငျဘေးတှငျ ရပျလိုကျပွီး ကြှနျတျောက နှုတျဆကျလိုကျသညျ ။ အဈမနကေောငျး လား ။ ကလေးကဘာလေးလဲအ ဈမ ။ ကြှနျတျော စကားသံကွောငျ့အဈမက ထထိုငျပွီး ။ သွျောမောငျသကျပါလား ။ယောကငြ်ျားလေးလေ ။ ဒါနဲ့ကိုလငျးကိုလဲ မမွငျပါလား ။ အမလေး မငျးအကို ကို တော့ ပွောမနပေါနဲ့ ။
မနကျကတညျးက ကလေးပစ်စညျးလေးတှေ သှားဝယျမယျဆိုပွီး ထှကျသှားလိုကျတာ မလာတော့ဘူး ။ညနထေမငျးပို့ ခြိနျမှပဲလာတော့မယျ ထငျတယျ ။ သူကဘယျသူလေးလဲ မောငျသကျ . မငျးကောငျမလေးလား ။ အဈမစကားကွောငျ့ ခြော မကျြနှာရဲသှားသညျ ။ ကြှနျတျော က ပြာပြာ သလဲ ။ ဟာမဟုတျပါဘူး အဈမကလဲ ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြးပါ ။ အိုး ဆောရီးနျော ညီမလေး အမမသိလို့ ပါ ။ အဈမကတောငျးပနျ စကားပွောတော့ ။ခြော က လညျး ။ ရပါတယျ အဈမရယျ မသိလို့ ပွောတာပဲ ။ ခဏကွာတော့ အဈမကိုနှုတျဆကျပွီး ကြှနျတျောတို့ ပွနျထှကျ လာပါတော့တယျ ။ ခြော ကတော့ကတ်တာလမျးကို ငုံ့ ကွညျ့ယငျး တလှမျးခငျြးလှမျးလြှကျ ။ ကိုသကျ ကိုလငျးကို ပွောလိုကျပါ ။ ခြောကိုလဲ လာမတှေ့ ပါနဲ့ ခြောအလုပျထဲ ကိုလဲ လုံးဝမလာပါနဲ့ ။ ဒီလို လူယုတျမာမြိုးကိုလဲ ခြောက အရမျးမုနျးတယျလို့ ပွောပေးပါ ။ ခြောသှားတော့တယျ ။ ခြောမကျြနှာကိုကွညျ့လိုကျတော့ မကျြရညျ နဲ့ အတူ ဒေါသကွောငျ့မကျြနှာက တငျးနသေညျ ။ ကြှနျတျော ခေါငျးညိတျပွ လိုကျပါတယျ ။ ခြောကပွောပွီး တာနဲ့ ထှကျသှား ပါတော့တယျ ။
ကြှနျတျော ကိုလငျး လကျထဲကို စာတဈစောငျထညျ့လိုကျပါတယျ ။ ဘာလဲကှမောငျသကျ ။ ဖတျကွညျ့လေ ။ ကိုလငျးဇျော ကြှနျမ မိဘ သဘောတူတဲ့သူနဲ့ လကျထပျတော့မယျ ကြှနျမကိုမေ့ လိုကျပါတော့ ။ နှုတျဆကျခဲ့ပါတယျ ။ ခြော ဘယျလိုဖွဈသှားတာလဲကှာ မငျးကိုရော ဘာပွောသှားသေးလဲ ။ ဘာမှပွောမသှားဘူး သူ့ နောကျမှာလဲ လူတဈယောကျပါတယျ ။။ စာပေးပွီး ထှကျသှားတော့တာပဲ။ ဟား ဒီလောကျတောငျမွနျ ရသလားကှာ ။အေးလေ ပွီးတော့လဲ ပွီးသှားတာပဲပေါ့ ။ ကိုလငျးဇျောက ပွောလဲပွော စာကိုဆုတျဖွဲပွီး ထှကျသှားပါတော့တယျ ။ ကိုလငျးထှကျသှားတော့ ကြှနျတျော ကနြေပျစှာပွုံးလိုကျပါတယျ ။
ဒီစာကို ခြောရေးတာ မဟုတျပဲ ကြှနျတျောရေးမှနျး ကိုလငျးသိလြှငျ ။ ကြှနျတေျာ့ကို လူလိမျဟုပွောမှာ အသအေခြာပငျ ။ ခြော သှားတှေ့ သော ကလေး အမေ သညျလညျး ကိုလငျး မိနျးမမဟုတျပဲ ကြှနျတေျာ့ အဈမ ဝမျးကှဲမှနျး ခြောသိခဲ့လြှငျ။ ကြှနျတေျာ့ကို လူလိမျဟု ပွောမှာ အသအေခြာပငျ ။ ကြှနျတျောကွိုတငျ အကြိုး အကွောငျး ပွောပွပွီး အကူအညီတောငျးထား သောကွာငျ့ ။ အဈမကလဲ မိနျးမ ခငျြး ကိုယျခငျြးစာ သဖွငျ့ ကူညီခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ ။ မညျသို့ ပငျဖွဈစေ ကိုလငျးကဲ့သို လူယုတျမာတဈယောကျ၏ လကျမှ ရိုးသားသော ။ မိနျးကလေး တဈယောကျ ရဲ့ ဘဝကို ကယျတငျခှငျ့ ရလိုကျ ခွငျးကို ပငျ ကြှနျတျော ကနြေပျမိပါသညျ ။ ထို့ ကွောငျ့ ကြှနျတေျာ့အား လူလိမျဟု ထငျလြှငျ ထငျကွပါစတေော့ ။
Ref - ကိုမောငျမောငျ